Banyere Anyị - Xinjia naịlọn Co., Ltd.
Huai'an Xinjia Naịlọn Co., Ltd. e guzobere na 1999. Tupu 2009, ọ bụ Huai'an Xinjia Plastic Factory. E degharịrị aha ya na aha ya ugbu a na February 2009. Thelọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na mmepụta, mmepe, na ire nke yarn yarn, waya na-emepụta ahịhịa. Naịlọn 610 mgbawa ngwaahịa, nwere a zuru ezu na nkà mmụta sayensị quality management usoro.
Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke mmepe na ihe ọhụrụ, Xinjia Nylon Co., Ltd. ghọrọ ihe ama ama na nylon yarn n'ichepụta osisi na Jiangsu Province. Anyị iguzosi ike n'ezi ihe, ike na ngwaahịa mma a ghọtara site na ụlọ ọrụ. A na-anabata ndị enyi sitere na ụdị ndụ niile ịbịa leta, duzie ma kparịta azụmahịa.
Huaian Xinjia Nylon Co., Ltd. nwere mpaghara nke 38 acres ma mepụta ntọala nylon yarn na mmepụta kwa afọ nke 4,100 tọn, yana mpaghara owuwu nke 23,600 square mita na ngụkọta ego nke 150 nde yuan. Companylọ ọrụ ugbu a nwere ndị ọrụ 150, nke 15 na-arụ ọrụ na nyocha na teknụzụ, ma nwee ike nyocha ngwaahịa na ikike mmepe. Enwere usoro mmepụta 6 ugbu a.
Anyị na-etinye na waya nịlọn 610; PBT; mụa waya; p acrylic waya; mụa waya; agịga ahụike Ọ nwere ike iji ya rụọ ọrụ igwe, ụgbọ ala, ụgbọelu, ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ kemịkal. Kpọmkwem, ọ nwere ike ịme biarin, pad, ihe akàrà, akụkụ igwe akwa, ntuziaka akụrụngwa, ụzọ, bristles, brushes, ntacha eze, wigs, wdg. Ma nwee ike hazie ngwaahịa dịka mkpa ndị ahịa, agba agba
Anyị ogbako ekpuchi ebe ndị 10,100 square mita na nwere 120 ọrụ, gụnyere 15 ndị ​​aku oru nyocha na mmepe, na nwere ike ngwaahịa mmepe ike. Companylọ ọrụ ahụ dị oke mkpa maka mmepe nke ngwaahịa na teknụzụ ọhụụ, ma na-etinye nnukwu mkpa na itinye ego na nyocha sayensị. Ọ na-etinyere maka 9 mepụtara na ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ. E nwere ugbu a usoro mmepụta 6, ma enwere ọtụtụ ndị na-atụgharị ejima, igwe na-akpụzi ọgwụ, ndị na-eme ka polymerization na ihe nyocha ndị metụtara ya na-eji nyocha na mmepe, nke nwere ike izute ihe ndị achọrọ nke nyocha ngwaahịa na onye na-anya ụgbọelu, onye na-anya ụgbọelu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ahụ agbanweela atụmatụ mmepe ya. Nke mbu, o tinyela onu ego na oru ndi mmadu iji mee ka ngwa ngwa nyocha na mmepe nke ngwa ahia di elu; nke abụọ, o jiri nlezianya hazie mmepụta nke ngwaahịa ndị mepụtara onwe ha iji hụ ogo ngwaahịa ndị ahụ; nke ato, o tinyewo uche na mmepe ahia ma gbadoro ahia. Ọganihu ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị otu ọrịre dị mma yana ndị ọrụ karịrị narị anọ na mba niile. ego nke silk eji mee ihe site na ihe dịka 10% kwa afọ, a na-amụkwa sutures ọgwụ na 5% kwa afọ. Tọrọ ntọala siri ike maka ire ngwaahịa.
Ezigbo mma:Companylọ ọrụ ahụ na-etinye aka na mmepụta nke ngwaahịa ndị mepụtara onwe ha iji hụ na ngwaahịa dị mma
Oge Mbuga ozi:Ahụmahụ na agadi mkpara, na-ekwe nkwa na-oge nnyefe
Zuru oke:Tumadi kewara eze ntanye, ulo oru ahịhịa waya, naịlọn waya, dị iche iche nkọwa na na agba nwere ike ahaziri. Ndị ot waya dayameta bụ 0.07M-1.8M, na agba ndị na-acha ọbara ọbara, odo, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo odo, isi awọ, nwa, na uzo.